PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - Ugwetshwe u-319 weminyaka umdlwenguli
Ugwetshwe u-319 weminyaka umdlwenguli
Isolezwe - 2017-11-15 - IZINDABA - PHILI MJOLI
UGWETSHWE iminyaka engu319 ebhadla ejele unogada wakwaFidelity Security ngokudlwengula abesifazane nokuphoqa abahamba nabo ukuthi bambuke uma esegila lo mkhuba.
UBheki Doctor Magwaza (47) waseWaterloo, ugwetshwe yinkantolo enkulu yaseThekwini, izolo ngemuva kokuvuma amacala angu-27 abebekwe wona.
Ubehleli ebheke phambili enkantolo ngesikhathi ijaji uRashid Vahed lethula isigwebo.
Iminyaka ewu-117 ngeyamacala ayisishiyagalolunye okudlwengula, engu-77 eyokuphoqa abagilwa noma ababehamba nabo ukuthi bambuke ezitika ngocansi lwempoqo. Ugwetshwe nodilikajele abahlanu ngokushaya ngenhloso yokulimaza abesifazane abahlanu abadlwengula.
Ngaphambi kokuthi ijaji lethule isigwebo, ummeli kaMagwaza ucele inkantolo ukuthi imshaye ngoswazi oluncane ngoba unezingane ezine azondlayo.
Uthe izingane ezimbili kulezi ezine ubehlala nazo.
Umshushisi uNkk Noxolo Dube uthe izizathu ezibekwa ngummeli kaMagwaza zijwayelekile. Utshele ijaji ukuthi uMagwaza akazange akhombise ukuzisola ngesikhathi kuqhubeka ukuthethwa kwala macala awenza phakathi kuka2008 kuya ku-2016.
“Akazange ayivezele inkantolo ukuthi yini eyayenza enze la macala. Ukhethe ukuwavuma kuphela, angachazi lutho. Ukuzifihla ngesikhathi edlwengula kuchaza ukuthi ukube akabanjwanga ngabe usaqhubeka nalo mkhuba. Esinye isihluku asenzile ukudlwengula umuntu wesifazane ebelethe ingane, lo wesifazane waze waqamba amanga wathi ingane yakhe iwumfana ngoba esaba ukuthi nayo ingase idlwengulwe.”Ijaji Vahed lithe uMagwaza ufihlele inkantolo waphinde wafihlela ummeli wakhe izizathu ebeziholela ekutheni adlwengule noma abaphoqe abanye abantu ukuthi bambuke edlwengula.
Ebhekise kuye uthe: “Nakho ukuvuma kwakho amacala kushiya umbuzo wokuthi ukube belungekho ulibofuzo olukuhlanganisa ngqo nala macala ubuzokwenza okufanayo yini? Ubufakazi obethulwe ngomunye wofakazi lapha enkantolo businike isithombe sobuhlungu laba besifazane ababuzwa. Ezinye izisulu zehlulekile ukungena ebhokisini kule nkantolo zibhekane nawe, zifakaze . Zikhetha ukubhala izitatimende,” kusho iJaji Vahed.
Liqhube lathi uMagwaza ungunogada oqeqeshelwe ukuvikela kodwa yena wakhetha ukwenza okuphambene nakufundele.
“Ukufihla kwakho izizathu zokwenza la macala kwenze ukuthi ngizicabangele ukuthi ungumuntu ongenanembeza odinga ukususwa emphakathini, ngingagudluki eminyakeni ebekiwe eyisijeziso samacala afana nalawa wakho,” kuphetha uVahed.